War murtiyeed ka soo baxay shirkii Garowe ku dhex maray R/Wasaaraha, Madaxda Puntland iyo Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War murtiyeed ka kooban afar qodob ayaa laga soo saaray shirkii maalmihii la soo dhaafay ku dhex maray magaalada Garowe Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Shirkan oo labo maalmood socday ayaa qodobada qaar ee looga hadlayay ahaa kuwo la isku mari waayay, waxaana Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ka soo hor-jeesteen qodobo uu hor-dhigay Ra’iisul Wasaaraha.
Inkastoo shalay Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas u ambabaxay dalka Kenya, xilli Ra’iisul Wasaaraha uu Garowe ku sugnaa ayaa Mr Gaas uu sheegay inuu miro dhalay wada hadaladaas mid mira dhal noqday.
Afarta qodob ee War murtiyeedka laga soo saaray ayaanay ku jirin qodobadii la isku mari waayay ee kala ahaa inay aqoonsadaan Maamulka Galmudug iyo Guddiyadii qaranka ahaa ee uu Baarlamaanka Soomaaliya meel mariyay.
Puntland ayaa horay u qaadacday maamulka Galmudug, waxaana muuqata in wali go’aankaas uu halkeedi yahay, maadaama war murtiyeedka shirka laga soo saaray ee lagu heshiiyay aanu qodobkaas ku jirin, kadib markii horay uga soo horjeestay dastuurka maamulkaas ee qeexayay xuduuda uu yeelanayo inay tahay Gobolka Nugaal.
Qodobada war murtiyeedka ku jiray ayaa waxaa ka mid ahaa in laga shaqeeyo Midnimada Soomaaliya, in la ilaaliyo dastuurka, Maamul goboleedyada la shaqeeyaan dowladda Federaalka iyo in Dib u heshiisiinta Umadda Soomaaliyeed.
Hadaba halkan hoose ka akhriso war murtiyeedka laga soo saaray shirka:-